XUKUUMADA OO QAADAY HAWLGAL AY DIB UGU DEJINEYSO XUMADA GANACSIGA DHOOFKA XOOLAHA | WWW.SOMALILAND.NO
XUKUUMADA OO QAADAY HAWLGAL AY DIB UGU DEJINEYSO XUMADA GANACSIGA DHOOFKA XOOLAHA
Posted on Luulyo 23, 2008 by weriye1
Hargeysa (sl.no) 23 july 2008 – Hawl-gal la isugu soo dhawaynayo Ganacsatada Xoolaha ee diidan heshiiska Xukuumada Iyo ganacsadaha Sucuudiyaanka ah ee Al-Jabiri, loogana gol leeyahay sidii wada-hadal loogu soo dabaali lahaa khilaafaadka ka taagan ganacsiga dhoofka xoolaha, ayaa mar kale ka dhex bilowday Xukuumada iyo ganacsatada Kooto diidka ah. Islamarkaana waxa shalay gelinkii danbe xabsiga laga sii daayay Gudoomiyaha gudiga ganacsatada xoolaha Maxamed Cabdiraxmaan (Awal Bari).
Sida ay tibaaxeen xogo aanu ka helay Ilo ku dhaw dhaw dhaq-dhaqaaqyadii ugu danbeeyay ee muranka dhoofka xoolaha, waxa la sheegay in wasiirka duulista hawada Cali Maxamed Warancade uu bilaabay Salaasadii 22-kii bishan hawl-gal isu soo jiidis ah, kaasoo wasiirka Daakhiliguna uu ku biiray wax-yar ka dib bilowgiisii. Xogahaasi waxay intaa ku dareen, in labada wasiir Waran-cade iyo Cabdilaahi Ciro, ay kulan la yeesheen ganacsatada una bandhigeen, in loo baahan-yahay in xaalada la dejiyo oo wada-hadal lagu soo dabaalo, wixii ay ka cabanayaana ay nabad-gelyo ku raadiyaan ee aanay xoog ku doonin.
Ilaha uu Wargeyska Ogaal soo xigtay waxay sheegeen, in ganacsatadu ay wasiirada u qadimeen, in marka hore la sii daayo gudoomiyohooda xidhnaa, dibna loo laabo waarano xadhig ah oo ay xoguhu tibaaxeen in loo jaray xubno kale oo ganacsato ah. Xogohaasi waxa kale oo ay sheegeen in ganacsatadu ay ka dalbadeen wasiirada in la fasaxo dhoofida xoolahooda Berbera ku sugan oo ay tibaaxaha dhinacooda ka soo baxayaa tiradooda ku sheegeen in ku dhow sagaal kun. Hase-yeeshee, Ilahaasi waxay intaa raaciyeen in Wasiiradu ay u sheegeen ganacsatada inay hawluhu kala horeeyaan ta dhoofka xooluhuna ay ku xidhnaan doonto wadahadalka, balse ay u balan-qaadeen sii daynta Gudoomiyahooda oo isla shalay galaba la sii daayay. Islamarkaana, waxaa la sheegay in wasiiradu ka dalbeen ganacsatada in inta laga gaadhayo wada-hadalka ay joojiyaan Xoolaha ay Berbera u dhaadhicinayaan, kuwa Berbera ku suganina ay halkaa iska joogaan. Xogahaasi waxay intaa ku dareen, in Ganacsatadu ay aqbaleen in wada-hadal lagu soo dabaalo arrinta, islamarkaana ay balan-qaadeen inay si nabad-gelyo ah ku raadsanayaan waxay doonayaan. Wararku waxay intaa ku dareen in hada ganacsatadu ay sugayaan xubno kale oo Burco ku maqnaa, si ay dhamaystir ugu galaan hawsha.
Ma jiraan xogo madaxbanaan oo dhinaca xukuumada iyo dhinaca kale mid-na si toos ah uga soo baxay, hase-yeeshee, tibaaxo sida dadban dhinacyo kala duwan uga soo baxay waxay muujinayaan, in hawl-galkan Cali Warancade iyo Cabdilaahi Ciro uu u soo wareegay dhinaca Ganacsatada ka dib markii ay is arkeen Madaxweynaha.
Dhinaca kale, Magaalada Berbera ayaa labadii maal-mood ee ugu danbeeyay waxaa ku sugnaa Ciidamo ku gaashaaman gaadiidka dagaalka, iyadoo sida wararku sheegayaana Xukuumadu Koontiinaro ku xidhay kadinka Dekada.iyadoo wali ay xoolaha Ganacsatada koota diidka ahi ay ku ururinayaana ay sii kordhayaan marba marka ka danbaysa.
Wariye Yaasiin oo xalay saacadihii danbe aanu wax ka weydiinay xaalada ayaa waxaa uu sheegay in Wali gaadiidka sida xooluhu ay ku qul-qulayaan, Islamarkaana loo sheegay in xoolo gaadhaya Sadex kun oo neef shalay ay ka soo baxeen Burco. Kuwaasoo lagu waday inay xalay u soo hoydaan Berbera.
« WARAR QUBANE AH BUSHAARO DADWEYNOOW BIL KHEYR WEEYE DHAHA »